Indawo ye- Bush Bungalows e- Sun City
I-Bush Bungalows e-Sun City itholakala ngaphakathi kwe-Sun City Resort.
Indawo yokubhuka isendaweni yaseNorth West, eNingizimu Afrika, i-5km kuphela (3 miles) ukusuka ePilanesberg National Park nasePredator World. I-Bush Bungalows e-Sun City ifinyeleleka kalula kusuka eGoli, eNingizimu Afrika, futhi ingamakhilomitha angu-40 kuphela ukusuka eRustenburg.
Indlela usuka e- OR Tambo International Airport
Izivakashi ezisuka kulesi sigameko kufanele zihlale ngakwesokunxele bese zithatha i-R21 ePitoli. Ngemuva kwama-37km (amamayela angu-23), thatha i-N1 East (ephuma 134) uye e-Polokwane. Qhubeka cishe ngamamitha angu-22 (14 miles) ku-N1 bese uthatha i-N4 (ephuma ku-156) uye eRustenburg.
Ngesikhathi se-N4, izivakashi zizohamba ngezindawo ezimbili ze-plazas.
Owesibili ubizwa ngokuthi iBrits Plaza. Cishe ngo-28km (17 miles) ukusuka eBrits Plaza, thatha umgwaqo we-R556 (ophumayo 225) uye eSun City. Qhubeka ngqo ku-R556 futhi emva kwamakhilomitha angu-77 (48 miles) uzofika esangweni elikhulu likaSun City. I-Bush Bungalows e-Sun City Resort itholakala ngokushesha ngemuva kwesango ngakwesokunene.
I-Bush Bungalows e-Sun City GPS Coordinates